သကျဦး: April 2008
ပီနန်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှစ် ၂၀၀ ပြည့်ပွဲတော်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ပီနန် ဓမ္မိကာရာမဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းမှာ အကြီးအကျယ် ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကွာလာလမ်ပူက အဖွဲ့တွေလည်း ပီနန်ကို ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့ ကို ကြည့်ကြရအောင် ....
ကွာလာလမ်ပူ - ဆူဘန်းဂျာယာ က ဆရာတော်ဦးရေ၀တ ကိုသိကြလား မသိဘူး...
တိုက်ပုံနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က Beyond Rangoon ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ အန်ကယ်ဦးကျော်ဝင်း လေ...
ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ် (မလေးရှားဌာနခွဲ) က အဖွဲ့ဝင်များ ...
ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း တနေရာ (ပုံထဲက ပုဂ္ဂိုလ်က ပီနန်လွှတ်တော်အမတ် ကိုမြင့်ဝေ (ဒိန်းမတ်) ရဲ့ အကို ကိုလတ် ပါ။)
လာရောက်ကြည်ညိုနေသော ပရိတ်သတ် ...
ပီနန်တောင် တက်ရာလမ်းတနေရာ ...
ပီနန်တောင်ပေါ်မှ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ ...
ပီနန်တောင် ကွမ်ယင်မယ်တော် ရင်ပြင်တနေရာ ...
ပီနန်တောင် ကွမ်ယင်မယ်တော် ရုပ်ထု ...
ပီနန်တောင်ပေါ် တနေရာ ...
Posted by Thet Oo at 12:35 PM No comments:
ဘာသာပြန်အလုပ်ရုံလေးတခု လုပ်ကြည့်တာပါ။ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ဒိန်းမတ် သုံးဘာသာနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ ဘာသာပြန်ပုံကို လေ့လာကြည့်ရအောင်...
Now the birth of Jesus was on the wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
ယေရှုခရစ်သည် ဘွားမြင်ခြင်းကို ခံတော်မူသော အကြောင်းအရာဟူမူကား၊ မယ်တော်မာရိသည် ယောသပ်နှင့် ထိမ်းမြားဆောင်းနှင်း၍ မရှက်တင်မှီတွင် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကြောင့် ပဋိသန္ဓေစွဲနေ၏။
Med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Hans moder, Maria, var trolovet med Josef; men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden.
(Holy Ghost = သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် = Helligånden)
သူ၏ခင်ပွန်းယောသပ်သည် သူတော်ကောင်းဖြစ်၍ မာရိအသရေကို မပျက်စေချင်သောကြောင့် တိတ်ဆိတ်စွာ စွန့်ပယ်မည်ဟု အကြံရှိ၏။
Nu var Josef, hendes mand, retsindig og ville ikke bringe skam over hende; derfor havde han i sinde at skille sig fra hende i stilhed.
(Beingajust man ကို သူတော်ကောင်းဟု ဘာသာပြန်ထားသည်။ ဒိန်းမတ်လို retsindig ကို အဘိဓာန်တွင် ရှာမတွေ့ပါ။)
ထိုသို့ကြံစည်၍နေစဉ်တွင် အိမ်မက်ကို မြင်ရသည်မှာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှား၍၊ ဒါဝိဒ်အမျိုး ယောသပ်၊ သင်၏ ခင်ပွန်းမာရိကို ထိန်းသိမ်းရမည်အခွင့်ကို မစိုးရိမ်နှင့်။ ဤပဋိသန္ဓေသည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကြောင့် ဖြစ်၏။
Mens han tænkte på dette, se, da viste en Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde:
(David ကို ဒေးဗစ် ဟု အနီးဆုံးအသံထွက်ဖြင့် မရေးဘဲ ဒါဝိဒ် ဟုရေးသည်။ Joseph ကိုလည်း ယောသပ် ဟု ရေးထားသည်။)
သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားသည် မိမိလူတို့ကို အပြစ်မှ ကယ်ချွတ်မည့်သူဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုဟူသော အမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟု ကောင်းကင်တမန်ဆို၏။
Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus ; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.
Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by prophet, saying,
ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ပရောဖက်ဖြင့် ထားတော်မူသော ဗျာဒိတ်တော် ပြည့်စုံမည် အကြောင်းတည်း။
Alt dette skete, for at det skulle gå i opfyldelse, som Herren talte ved profeten, der siger:
ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကား ကြည့်ရှု့လော့။ သတို့သမီးကညာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍ သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်လတံ့။ ထိုသားကို ဧမာနွေလအမည်ဖြင့် မှည့်ရကြလတံ့ဟု လာသတည်း၊ ဧမာနွေလ အနက်ကား၊ ငါတို့နှင့် အတူ ရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်ဟု ဆိုလိုသတည်း။
Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel (det betyder : Gud med os).
ယောသပ်သည် အိပ်ပျော်နေရာမှ နိုးလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်မှာထားသည်အတိုင်းပြု၍ မိမိခင်ပွန်းကို ထိန်းသိမ်းလေ၏။
Da nu Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og hjemførte hende som sin hustru.
And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his
သို့သော်လည်း သားဦးကို မဘွားမှီတိုင်အောင် သံဝါသမပြုဘဲနေ၏။ ထိုသားကိုလည်း ယေရှုဟူသော အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။
Og han kendte hende ikke, førend hun havde født en søn; ham gav han navnet Jesus.
(ဒီနေရာမှာ သံဝါသပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတာက အင်္ဂလိပ်လို knew နဲ့ ဒိန်းမတ်လို kendte.
Knew နဲ့ kendte က အဓိပ္ပါယ်တိုက်ရိုက်တူပေမယ့် မြန်မာလို ပြန်ထားတဲ့ဟာကျတော့ တမျိုးပဲနော်။)
Posted by Thet Oo at 5:21 PM No comments:
Posted by Thet Oo at 9:23 AM2comments:
Posted by Thet Oo at 1:30 PM4comments: